Al Shabaab Oo 59 Askari Ku Dishay Weerar Ka Dhacay Degmada Buula Mareer.
Sunday April 01, 2018 - 11:39:35 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xooggan oo maanta barqadii ka dhacay degmada Buula Mareer ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay weerar qorshaysan oo xoog kugal ah ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda uga suganyihiin degmada.
War rasmi ah oo kasoo baxaya Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu xaqiijiyay in 59 askari oo Yugaandheys ah lagu dilay weerarka oo ahaa mid aad u xooggan oo isugu jiray istish-haadi iyo inghimaasi xoog kugal ah.
Al Shabaab waxay sheegtay in gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu ka xaynayay dagaalyahan Naftiis hure ah uu gudaha ugalay saldhigga AMISOM kadibna waxaa saldhigga ku daatay ciidamo inghimaasiyiin ah oo halkaas kula dagaallamay ciidamo katisan Melleteriga Uganda.
Muddo Sedax Saacadood ah ayay dagaallo culus ka socdeen gudaha degmada Buula Mareer waxayna wararku xaqiijinayaan in saldhigga ciidamada AMISOM Burbur xooggan uu gaaray Meydadka ciidamada Yugaandha ayaa daadsan gudaha saldhigga iyo Banaankiisa.
in kabadan 59 askari ayaa lagu dilay weerarka oo ahaa mid lagu daah furay camaliyad istish-haadi ah, sidoo kale weerar naf hurnimo ayaa qabsaday kolonyo ciidamo Yugaandheys ah oo gurmad kasoo fidinayay deegaanka Golweyn xilligii uu socday dagaalkii Buula Mareer.
"ugu yaraan 59 askari oo katirsan ciidamada saliibiyiinta Yuganaadha ayaa ku dhimatay weeraro istish-haadi iyo Inghimaasi ah oo lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin degmada Buula Mareer wixii faah faahin ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha'allaah " ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen hugunka rasaasta iyo madaafiic xooggan oo dagaalka laysku dhaafsanayay, sidoo kale meelo fol fog oo katirsan sh/hoose ayaa laga maqlayay jugta qaraxyada.